Ziziphi iindlela eziqinisekisiweyo zokufumana i-backlink fast?
Ngaba usakholelwa ukuba indlela yodwa yokufumana i-backlinks esemgangathweni yokukhawuleza kukudala umxholo omkhulu kwaye ulinde ngelixa abasebenzisi baxhamla kuwe? Ukuba ewe, eli nqaku liza kuvula amehlo akho kwinyaniso. Ngokuqinisekileyo, ukudala umxholo wemgangathiso kubalulekile kunoma yiphina inqaku lokuphucula injini, kodwa kuya kuthatha iinyanga okanye nokuba iminyaka ukutsala abafundi kwizinto zakho.
Kule nqaku, siza kuthetha indlela yokukhawulezisa inkqubo yokufumana i-backlink kwisayithi lakho kwaye uphucule ulwazi lwenkcazelo yakho kwiphepha lekhompyutheni ye-injini.
Iindlela zokufumana i-backlinks fast
Phendula imibuzo kwi-Quora
bafuna iimpendulo ezifanelekileyo kwimibandela yabo. Iqonga elincinci, apho ubuncinane abantu abayizinkulungwane eziliqela ngosuku bayabuza imibuzo yabo. Kuya kuba budenge ukungawuthobeli eli thuba ukukhulisa ulwazi lwakho lwezentengiso kwaye ukhange abathengi abatsha kwiwebhusayithi yakho. Konke okufuneka ukwenze ukukhangela amagama akho ahambelana niche. Ngenxa yoko, uya kufumana ikhulu lamawaka emibuzo elinde impendulo yakho. Kufuneka uphendule imicimbi apho uyingcali, kwaye ukuba kukho ibhokisi yeblogi ethile okanye inqaku ngaphakathi kwesizinda sakho esingaba ngumpendulo ochaphazelekayo kumbuzo, faka isiqhagamshelo kuyo. Nangona kunjalo, kufuneka uqinisekise ukuba awuxhasi kuphela kwisiza sakho ukuze ufumane unxibelelwano. Ukuba unqwenela ukugawula i-Quam, ke mhlawumbi kuya kubangela izigwebo zeli qonga, kwaye uya kususa kwinkqubo.
Kukho umthombo onceda abalobi, ii-bloggers kunye neentatheli ezibizwa ngokuba yiHARO. Nawuphi na umntu ochaphazelekayo unokuthumela imibuzo apho, kwaye ukuba unempendulo kwimibandela yabo esekelwe kwiphando, unokufumana ukhululo olukhululekile. Inqaku lakho linokuvela kwiwebhusayithi yeendaba kunye nabaphulaphuli abanzi okanye ufumane i-press free. Unokuba ushicilelwe kwimithombo yeendaba ezigunyazisiweyo njengeNew York Times, Usomashishini kunye nabanye, okwenza iHARO ibe yindawo efanelekileyo yokuthabatha i-backlinks ephezulu. Enyanisweni, awuyi kufumana amanqaku amaninzi kulo mthombo. Nangona kunjalo, abo oya kukwazi ukukufumana banokukuzisa ubuninzi kunye nokwethemba.
Ufuna iinqununu eziphahliweyo
Isakhiwo esixhumeneyo sakhiwo sinokuba nethuba elifanelekileyo lokufumana i-backlinks fast. Nangona kunjalo, kunokuba nzima ukuba ugxininise uhlobo olufanelekileyo lwezixhumanisi. Kukho ezininzi iiwebhusayithi eziye zaphuka izikhonkco, kodwa kude kwazo zonke zifuna ukulungisa izixhumanisi zazo eziphukileyo kwaye zibeke zakho esikhundleni sokuba ziphukile. Ukufumana iziphumo ezingcono uzonciphisa uphando lwakho. Kufuneka ukhangele imithombo yewebhu kunye nezikhonkco eziphukileyo kwi-niche yakho yemarike. Njengomthetho, ii-webmasters ziyakwazi ukulungisa izikhonkwane eziphukileyo kumaphepha abo ewebhu ngokubanzi kwizithuba zeblogi. Ngokwenza njalo, bavelisa ezinye izithuthi kwi-domain yabo kunye nokuphucula i-website ye-SEO Source .